Black Friday: Ny tolotra tsara indrindra amin'ny automation an-trano sy ny feo | Gadget News
Miguel Hernandez | 23/11/2021 17:47 | General, About us
El Zoma Mainty Efa akaiky sahady izany, ary na dia toa haharitra ela kokoa aza izany, tamin'ity indray mitoraka ity dia tianay ny hiandrandra miaraka amin'ny fanangonana mahaliana. Toy ny isan-taona dia manao jery todika sy mitady tolotra amin'ireo vokatra efa nandramanay izahay ary azonay aroso amin'ny fahatsoram-po tanteraka ary izany no vokany.
Ireo no tolotra Black Friday tsara indrindra amin'ny resaka automation an-trano sy feo, amboary ny tranonao marani-tsaina ary mazava ho azy fa mankafy ny mozika tsara indrindra. Aza adino izy ireo, satria tonga ny fotoana hanangonam-bola kely amin'ny fividianana izay tadiavinao foana.
1 Amazon Echo Show 5 - Fijery voalohany an'i Alexa
2 Roborock S7 - Ilay mpanadio banga robot farany indrindra
3 Jabra Elite 85t - vokatra boribory
4 Karazana vokatra Sonos
5 Huawei WiFi AX3 - Miaraka amin'ny WiFi 6 ho an'ny lalao sy automatique an-trano
6 FreeBuds amin'ny karazana sy loko rehetra
7 Tolotra lehibe hafa izay tsy tokony ho diso
Amazon Echo Show 5 - Fijery voalohany an'i Alexa
Ny Amazon Echo Show dia iray amin'ireo safidy mahaliana indrindra amin'ireo izay manambatra ny feo sy ny automatique an-trano amin'ny vokatra mitovy. Amin'ity tranga ity, manana ny fitaovana fanamafisam-peo an'ny Amazon Echo Dot miaraka amin'ny efijery kely dimy santimetatra isika, mamolavola ohatra mba hahafahana mitantana ny fitaovana IoT, mitantana YouTube na mandeha amin'ny Spotify amin'ny fomba haingana sy tsotra, zavatra izay milalao tena manohana ity fitaovana ity.
Ny Amazon Echo Show 5 (2021) dia manana vidiny mahazatra mihoatra ny 89 euros ary amin'izao fotoana izao 44,99 euros fotsiny izany, izay fihenam-bidy lehibe ho an'ny iray amin'ireo fitaovana mahaliana indrindra ary manana sanda tsara indrindra amin'ny vola ananan'i Amazon ao amin'ny katalaony.Jereo ny hevitray fa mety hiafara amin'ny iray ianao.
Roborock S7 - Ilay mpanadio banga robot farany indrindra
Ny marika Roborock S7 vaovao no be mpitia indrindra avy amin'ny marika iray izay nahavita nahazo toerana manan-danja eo amin'ny tsena ka tototry ny mpanadio banga robot. Efa nanandrana ity modely ity izahay ary manadio tsara, tsy misy olana amin'ny fampisehoana ary adala ny fahaleovan-tena. Izany rehetra izany dia niaraka tamin'ny fanavaozana rindrambaiko maro ary na dia toby fanariam-pako malaza Automatic izay hahafaly izay kamo fanadiovana.
Amin'izao fotoana izao dia misy fihenam-bidy 150 euros, noho izany Azonao atao ny mividy izany amin'ny 499,00 euros, fihenam-bidy lehibe izay raha ny fahitako azy no mpanadio banga robot tsara indrindra amin'ny taona 2021. Aza adino ny analyse anay, satria ao anatin'io no ahitanao raha tena mendrika izany.
Jabra Elite 85t - vokatra boribory
Tsy afaka manombana izany amin'ny fomba hafa aho, Ny sofina Jabra Elite 85t dia mirehareha amin'ireo endri-javatra izay misy ny laharana ambony indrindra. Jabra dia efa mitovitovy amin'ny kalitao ary amin'ity, iray amin'ireo vokatra tsara indrindra ao amin'ny katalaogy manontolo, dia tsy ho latsa-danja izany. Manana fanafoanana tabataba mavitrika izahay, bateria maharitra ary izany rehetra izany miaraka amin'ny iray amin'ireo fampiharana feno indrindra eny an-tsena ho an'ity tanjona ity.
Ny kalitaon'ny feo dia tena tsara ary na dia somary mampidi-doza aza ny famolavolana, dia mampiova ny zava-dehibe, ny zava-drehetra mifandraika amin'ny feo. Manana vidiny mahazatra izy ireo 228,99 euros, saingy Miaraka amin'ny fihenam-bidy 35% dia afaka mividy azy ireo amin'ny 149,99 ianao mandritra ity herinandron'ny Black Friday ity amin'ny Amazon.
Karazana vokatra Sonos
Raha mitady ny tsara indrindra amin'ny kalitao, ny vidiny ary ny fifandraisana ianao dia tsy isalasalana fa Sonos izany. Eto izahay dia nandinika ny vokatra isan-karazany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia hifantoka amin'ireo izay manana fihenam-bidy be izahay, miampy 20% ny kojakoja Sonos dia natomboka ho an'ny mpampiasa rehetra izay manapa-kevitra ny hividy amin'ny alàlan'ny tranokalany sy ny fihenam-bidy lehibe amin'ny Roam izahay.
Amin'ny lafiny iray, ny Sonos tiako indrindra tamin'ity taona ity hazo taranaka faharoa, fanamafisam-peo mahery vaika, feno ary miaraka amin'i Dolby Atmos sy ireo mpanampy virtoaly lehibe toa an'i Google Assistant sy Amazon Alexa, tsy manadino ny mifanaraka amin'ny Apple HomeKit. Manana fihenam-bidy mihoatra ny 30% amin'ny Amazon ianao ka afaka mividy izany amin'ny 369 euros fotsiny.
Huawei WiFi AX3 - Miaraka amin'ny WiFi 6 ho an'ny lalao sy automatique an-trano
Amin'ity vokatra ity dia afaka mankafy ny fenitra isika Wifi 6 amin'ny 802.11ax / ac / n / a 2x2 sy 802.11ax / n / b / g 2x2 sy MU-MIMO,tsy misy mihoatra ary tsy misy zavatra kely noho izany. Ny processeur izay mitondra an'io rehetra io dia a GigaHome Quad-Core 1,4 GHz izay tompon'andraikitra amin'ny fanaparitahana ireo fambara amin'ny fomba hendry, ary koa ny famelana antsika hankafy ireo fiasa amin'ny fampiharana AI Life an'ny Huawei izay horesahintsika avy eo. Ny hany sisa holazaina, na dia efa niresaka momba izany aza isika, dia ny fananantsika NFC eo am-potony.
Discount ao amin'ny Huawei Store izay ahafahanao mividy izany amin'ny 39,90 euros ihany miaraka amin'ny fanaterana avy hatrany any amin'ny fivarotanao, na raha tianao halefa any an-trano izy io. fihenam-bidy 60% amin'ny Amazon izay ahafahanao mividy izany amin'ny 39,99 euros. Raha ny marina, raha mbola manana ny router'ny orinasanao ianao dia efa maka fotoana handehanana amin'ny kinova farany misy amin'ny WiFi 6.
FreeBuds amin'ny karazana sy loko rehetra
écouteur TWS, misy fanafoanana tabataba, en-sofina, nentim-paharazana ... Manana karazany tsy manam-petra ianao ao amin'ny sehatra FreeBuds, écouteur Huawei ary efa nanandrana azy rehetra izahay ary manoro ireto manaraka ireto izahay araka ny tsironao sy ny filanao:
Free Buds Pro: Ny kalitaon'ny feo tsy manam-paharoa, ny fanafoanana ny feo avo indrindra eny an-tsena ary amin'ny vidiny tsara indrindra, azonao atao ny mividy azy ireo eo ambanin'ny 99 amin'ny dikan-teny volondavenona sy amin'ny dikan-teny fotsy. Ny safidy ho an'ny ankamaroan'ny gourmets.
Free Buds 4: écouteur semi in-ear miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika fa tsy mandeha, rafitra mikrofona tsara ary rafitra fampitoviana manan-tsaina ho an'ny aina indrindra izay tia miasa mandritra ny tontolo andro miaraka amin'izy ireo, 109 euro fotsiny.
FreeBuds 4i: Ny fividianana hendry, miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba, ny fahaleovan-tena lehibe, ny fampiononana ary indrindra ny fahaiza-manao amin'ny vidiny mirary, 49 euro ihany.
Tolotra lehibe hafa izay tsy tokony ho diso
Dreame T20: Fanadiovana banga mahery vaika sy azo ampiasaina miaraka amin'ny kojakoja maro ho an'ny, fahaiza-misaina lehibe miaraka amin'ny fitaovana ilaina rehetra amin'ny fanadiovana lalina isan'andro, tsy isalasalana fa mijoro amin'ny safidy Dyson, 254 euros fotsiny amin'ny Amazon.
Amazon Fire TV Stick Max: Raha mianatra mividy ny TV Stick mahazatra isika satria tsy mila votoaty Full HD bebe kokoa, dia miavaka ny fahasamihafana. Ankehitriny miaraka amin'ny WiFi 6 sy Dolby Atmos mifanaraka amin'ny hery rehetra sy ny fanatsarana hatrany, vidin'ny fihomehezana 38,99 euros (40% fihenam-bidy).
Amazon Echo andiany fahefatra: Ny Amazon Echo no safidy voalohany omen'ny Amazon ho anao raha te hanangana trano mifandray amin'ny alàlan'ny Zigbee ianao nefa tsy mahafoy ny kalitaon'ny feo ahafahanao mihaino mozika. Na dia marina aza fa manome vidiny lafo izy, saingy nitombo izany raha oharina amin'ny maodely teo aloha, manana ny Amazon Echo Dot an'ny taranaka fahefatra avy amin'ny € 59,99 (BUY).
Toy izany koa, afaka mandalo ianao ho an'ny fizarana hevitray izay hahitanao ireo vokatra nodinihinay nandritra ny taona ary tsy isalasalana fa mety ho toy ny fomba hafa mahaliana tokoa ankehitriny fa nihena ny vidin'ny Black Friday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Black Friday: Ny tolotra tsara indrindra amin'ny automation an-trano sy ny feo